/g,'>').replace(/"/g,'"'), data = data_escaped.replace(/([\_u1031\_u103A]*)([\_u1000-\_u1021])/g,"$1\_u200b$2").replace(/\_u1031/g,"\_u200b\_u1031"); if (data != data_escaped) $(this).replaceWith(data); }); }); လင္းဦး(စိတ္ပညာ) _ Lin Oo: ရုရှားနှင့် ေဂျာ်ဂျီယာစစ်ပွဲ (၁၁-၈-၂၀၀၈)
ရုရှားနှင့် ေဂျာ်ဂျီယာစစ်ပွဲ (၁၁-၈-၂၀၀၈)
1. ရုရှားဂျက်ေလယာဉ်များသည် Kodori Gorge ကို ဗံုးြကဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းနယ်ေြမ မှာ ၂၀၀၆ခုနှစ်တွင် ေဂျာ်ဂျီယာတပ်များ ရယူခဲ့ေသာ နယ်ေြမြဖစ်ပါသည်။ ရုရှားတပ်များသည် Abkhaz နယ်စပ်တွင် တပ်များစုလျက် ရိှပါသည်။ ရုရှားစစ်တပ်က ေဂျာ်ဂျီယာစစ်သေဘင်္ာကို ပစ်ခတ်နှစ်ြမှပ်ခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည်။
2. ရုရှား၀န်ြကီးချုပ် Vladimir V.Putin သည် ပီကင်းမှ စေနေန့တွင် ေရာက်ရိှခဲ့ပါသည်။
3. ေဂျာ်ဂျီယာြမို့ေတာ်ြဖစ်သည့် Tbilisi ြမို့၏ေလဆိပ်ကို ဗံုးြကဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ တိုက်ခိုက်မှုသည် ဥေရာပသမဂ္ဂ အထူးကိုယ်စားလှယ် မေရာက်လာမီအချိန်တွင် ြဖစ်ပါသည်။ ပျက်စီးမှု အနည်းငယ်သာ ရိှပါသည်။
4. ေဂျာ်ဂျီယာသတင်းများအရ ရုရှားေလေြကာင်းမှ တိုက်ခိုက်မှုတွင် Gori ြမို့၌ ြပည်သူ ၆၀ခန့် ေသဆံုးခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည်။ တနဂင်္ေနွေန့တွင် ရုရှားတပ်များ ဆက်လက် ချီတက်လျက် ရိှပါသည်။
5 ေတာင်ဖက် Ossetia ြမို့ေတာ် Tskhinvali ကို ေဂျာ်ဂျီယာတပ်များက အေြမာက်များြဖင့် ပစ်ခတ်ခဲ့ပါသည်။ ြပင်းထန်စွာ တိုက်ခိုက်ြပီးေနာက် ရုရှားတို့သည် ြမို့ေတာ်ကို ရယူခဲ့ပါ သည်။ ေတာင် Ossetia ြမို့ေတာ်တစ်ခုလံုးနီးပါကို ရုရှားတို့ ထိန်းချုပ်ထားပါသည်။
ရုရှားတပ်များသည် ခွဲထွက်ြပည်နယ် ေတာင် Ossetia ြပည်နယ်မှေနြပီး တင့်ကား၊သံချပ်ကာများြဖင့် ချီတက်ကာ ေဂျာ်ဂျီယာသို့ တနဂင်္ေနွေန့၌ တိုက်ခိုက်ခဲ့ြပီး တိုက်ပွဲြပင်းထန်စွာြဖစ်ပွားခဲ့ပါသည်။ ရုရှားတပ်များသည် တိုက်ပွဲြဖစ်ပွားခဲ့သည့် (၃)ရက်အတွင်း ြကည်းတပ်များကို အသံုးြပုြပီး ေဂျာ်ဂျီယာ အလယ်ပိုင်းတွင်ရိှေသာ Gori ြမို့သို့ တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်ဟု ေဂျာ်ဂျီယာ အရာရိှများက ေြပာဆိုလိုက်သည်။
ေဂျာ်ဂျီယာြမို့ေတာ် Tbilisi ကို ဗံုးြကဲြခင်းသည် ရုရှားကိုေထာက်ခံထားသည့် ခွဲထွက်ေရး ေတာင် Ossetia နှင့် Abkhazia ြပည်နယ်များ လံုြခံုမှုအတွက်သာမက ယခင်ဆိုဗီယက်ြပည်ေထာင်စု၏ ြပည်နယ် တစ်ခုြဖစ်ခဲ့ြပီး အေမရိကန်ကို လိုလားသည့် ေဂျာ်ဂျီယာနိုင်ငံ၏ တပ်မေတာ်အား အင်အားချိနဲ့သွားေစရန် အတွက် ြဖစ်ပါသည်။
ေဂျာ်ဂျီယာက အပစ်အခတ်ရပ်စဲရန် ကမ်းလှမ်းြပီး ၎င်း၏တပ်များကို ေတာင် Ossetia မှ ရုတ်သိမ်း ြပီးေနာက် ရုရှား၏ ထိုးစစ်ေြကာင့် နိုင်ငံတကာစိုးရိမ်မှုနှင့် အမျက်ေဒါသြဖစ်မှုကို အြကီးအကျယ်ြဖစ်ေစခဲ့ြပီး အေမရိကန်နိုင်ငံနှင့် အြပင်းအထန် သံတမန်ေရးရာ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုများ ြဖစ်ေပါ်ေစခဲ့သည်။ ရုရှားက ေဂျာ်ဂျီယာကို သိမ်းရန် ရည်ရွယ်ချက် ရိှ/မရိှ မသိရေသးေသာ်လည်း အေနာက်နိုင်ငံများက ေကျာေထာက်ေနာက်ခံ ေပးထားသည့် ေဂျာ်ဂျီယာသမ္မတကို ဖယ်ရှားရန် (သို့မဟုတ်) စစ်တပ်ကို ဖျက်စီးရန် ရည်ရွယ်ချက်ရိှနိုင်သည်ဟု အေနာက်နိုင်ငံ အဆင့်ြမင့်အရာရိှနှစ်ဦးက ေြပာြကားလိုက်သည်။
အမည်မေဖာ်လိုသည့် အေနာက်သံတမန်တစ်ဦးက ရုရှားနှင့် ေဂျာ်ဂျီယာတို့သည် အမှန်တကယ် စစ်ေြပြငိမ်းသည့် အေနအထားသို့ ေရာက်ရိှရန် ေ၀းပါေသးသည်ဟု ေြပာလိုက်ပါသည်။ ရုရှားနှင့် ယခင် စစ်ေအးကာလ ရန်သူများအြကား အြငင်းပွားတိုက်ခိုက်မှုများ အရှိန်အဟုန် ြကီးထွားလာမှုသည် ဆယ်စုနှစ်များအတွင်း အြမင့်ဆံုးအဆင့်သို့ ေရာက်ရိှလာခဲ့သည်။ အေမရိကန် သမ္မတဘွတ်ရှ်သည် ေဂျာ်ဂျီယာကို ဒီမိုကေရစီ အမှန်တကယ်ကျင့်သံုးသည့် နိုင်ငံတစ်ခုအြဖစ် အသိအမှတ်ြပုထားြပီး ၎င်း၏ စစ်တပ်အင်အား ခိုင်မာေစေရးအတွက် အကူအညီေပးကာ ေဂျာ်ဂျီယာအား ေနတိုး (NATO)၏ အဖွဲ့၀င်ြဖစ်လာေရးအတွက် တိုက်တွန်းလျက်ရိှပါသည်။ ေဂျာ်ဂျီယာသည် ရုရှားနှင့် အာရှအလယ်ပိုင်းမှ ေရနံများ အေနာက်နိုင်ငံများသို့ ပို့ေဆာင်ေပးသည့် အဓိကလမ်းေြကာင်းအြဖစ် ရိှေနပါသည်။
ေရတပ်၊ ေလတပ်နှင့် ဒံုးကျည်တိုက်ခိုက်မှုများ ပါ၀င်သည့် စစ်ေရးအေရးယူမှုသည် ဆိုဗီယက် ြပည်ေထာင်စုြပိုကွဲြပီးေနာက် ရုရှား၏ အြကီးမားဆံုးေသာ စစ်ေရးအေရးယူမှုပင်ြဖစ်ပါသည်။ အေမရိကန် သမ္မတဘွတ်ရှ်နှင့် ဥေရာပေခါင်းေဆာင်များက သံတမန်ေရးအရ ြပင်းထန်စွာ သတိေပးေနေသာ်လည်း ရုရှား၏တိုက်ခိုက်မှုသည် တြဖည်းြဖည်း အရှိန်ြကီးထွားလာေနပါသည်။ အချို့ေသာ အေနာက်နိုင်ငံများသည် သဘာ၀ဓါတ်ေငွ့အတွက် ရုရှားအား အြကီးအကျယ်မှီခိုေနရြပီး အေမရိကန်အေနြဖင့်လည်း အီရန်၏ နယူးကလီးယားလက်နက် ြခိမ်းေြခာက်မှု ေလျာ့ပါးေစရန် အမှန်တကယ်လိုလားပါက ေမာ်စကို၏ ပူးေပါင်းမှုကို များစွာလိုအပ်လျက် ရိှေနပါသည်။
ပီကင်း အိုလံပစ်ပွဲတွင် ေရာက်ရိှေနသည့် သမ္မတဘွတ်ရှ်က ရုရှား၏ တိုက်ခိုက်မှုကို ြပင်းြပင်းထန်ထန် ေ၀ဖန်လိုက်ြပီး အပစ်အခတ် ချက်ြခင်းရပ်စဲရန်် ေတာင်းဆိုလိုက်ပါသည်။ အေမရိကန် ဒုသမ္မတ Dick Cheney က ရုရှား၏ ကျူးေကျာ်တိုက်ခိုက်မှုသည် အဓိပ္ပါယ်မရိှသည့် လုပ်ရပ်ြဖစ်ေြကာင်း၊ ကျူးေကျာ်မှု ဆက်ြပီးြဖစ်ေနပါက အေမရိကန်အပါအ၀င် နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအ၀ိုင်း ဆက်ဆံေရးကို ထိခိုက်ေစနိုင်သည့် အကျိုးဆက်များစွာ ရိှနိုင်ေြကာင်းေြပာြကားခဲ့မှုအေပါ် အိမ်ြဖူေတာ် ေြပာေရးဆိုခွင့် ရိှသူက သတင်းထုတ်ြပန်ခဲ့ပါသည်။
ရုရှားအရာရိှများက ေြပာဆိုရာတွင် ေတာင် Ossetia ကို ေဂျာ်ဂျီယာတိုက်ခိုက်မှုေြကာင့် တိုက်ပွဲတွင် အရပ်သား အများအြပား ေသဆံုးခဲ့ရသည်ဟု ေြပာြကားလိုက်ပါသည်။ သို့ေသာ် အေနာက် သံတမန်များနှင့် စစ်ဘက်အရာရိှများက ရုရှားက စစ်ပွဲကို ပိုမိုြကီးထွားေအာင် တိုက်ခိုက်လာမည်ကို စိုးရိမ်ြကြပီး Abkhazia တွင် ဒုတိယစစ်မျက်နှာခင်းကာ ေဒသေတာ်ေတာ်များများကို လွှမ်းမိုးမှုရေအာင် ေဆာင်ရွက်လာနိုင်မည်ကို လည်း စိုးရိမ်ြကပါသည်။
တနဂင်္ေနွေန့တွင် ရုရှားမှ အေြမာက်များြဖင့် Gori ြမို့ကို ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ပါသည်။ Gori ြမို့မှာ ေဂျာ်ဂျီယာနိုင်ငံတွင် အဓိက စစ်ေရးတည်ေဆာက်မှုနှင့် ပို့ေဆာင်ေရး အချက်အြခာကျေသာြမို့ ြဖစ်ပါသည်။ Abkhazia ြပည်နယ် ခွဲထွက်ေရးသမားများ၏ ေဒသတွင် ရုရှားေလထီးတပ်နှင့် ၎င်း၏မဟာမိတ် Abkhaz ခွဲထွက်ေရးသမားများ စုေပါင်းြပီး ေဂျာ်ဂျီယာအထူးတပ်ဖွဲ့များကို တိုက်ခိုက်လျက်ရိှြပီး ေဂျာ်ဂျီယာနိုင်ငံ၏ အြငင်းပွားမှုမရိှေသာ နယ်နမိတ်၏ နယ်စပ်ကို ြဖတ်ေကျာ်ရန် ြကိုးစားလျက်ရိှသည်ဟု ေဂျာ်ဂျီယာအစိုးရ အရာရိှများက ေြပာြကားပါသည်။
ရုရှားက Tbilisi ြမို့၏ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာေလဆိပ်ကို ြပင်သစ်နိုင်ငံ နိုင်ငံြခားေရး၀န်ြကီး Mr. Bernard Koucher ေလယာဉ် မဆင်းသက်မီ ဗံုးြကဲခဲ့သည်ဟု ေဂျာ်ဂျီယာ အစိုးရ အရာရိှများက ေြပာြကားပါ သည်။ Mr. Bernard Koucher မှာ ေစ့စပ်ညိှနိှုင်းေရးအတွက် ဥေရာပသမဂ္ဂမှ ေစလွတ်လိုက်သူ ြဖစ်ပါသည်။ ြမို့ေတာ်အြပင်ဘက်တွင်ရိှေသာ ေလေြကာင်းဆိုင်ရာစက်ရံုကို ရုရှားမှ ဗံုး (၂)ြကိမ် ြကဲခဲ့ပါသည်။ Abkhazia ကမ်းရိုးတန်းတွင် ကင်းလှည့်သည့် ရုရှားသေဘင်္ာက ၎င်းတို့အား ပစ်ခတ်ခဲ့သည့် ေဂျာ်ဂျီယာ လက်နက်ပစ် သေဘင်္ာအား ပစ်ခတ်နှစ်ြမှပ်နိုင်ခဲ့သည်ဟု ရုရှား ကာကွယ်ေရး၀န်ြကီးဌာနက ေြပာဆိုလိုက်ပါသည်။
ရုရှားအစိုးရက ရုရှားတပ်များ ေဂျာ်ဂျီယာနိုင်ငံသို့ ၀င်ေရာက်တုိုက်ခိုက်မှုအေပါ် ြငင်းဆိုခဲ့ြပီး ယခုလို အေရးယူေဆာင်ရွက်မှုသည် ရုရှား၏ြငိမ်းချမ်းေရးထိန်းသိမ်းမှုတပ်ဖွဲ့များအား ေဂျာ်ဂျီယာတပ်များက တိုက်ခိုက်ခဲ့မှုအေပါ် တန်ြပန်အေရးယူေဆာင်ရွက်ခဲ့ြခင်းသာ ြဖစ်ပါသည်ဟု ေြပာဆိုပါသည်။
ရုရှားကာကွယ်ေရး၀န်ြကီးဌာနမှ အဆင့်ြမင့်အရာရိှတစ်ဦးက ရုရှားအေနြဖင့် တနဂင်္ေနွေန့ အေစာပိုင်းအထိ ေဂျာ်ဂျီယာနယ်နမိတ်အတွင်းသို့ ၀င်ေရာက်ရန် ရည်ရွယ်ခဲ့ြခင်း မရိှဟု ေြပာြကားပါသည်။ ဘွတ်ရှ်အစိုးရက ရုရှား၏ကျူးေကျာ်မှုကို ကန့်ကွက်ြပီး ကုလသမဂ္ဂလံုြခံုေရးေကာင်စီ၏ ဆံုးြဖတ်မှုကို ရယူရမည်ြဖစ်ေြကာင်း ေြပာြကားလိုက်ပါသည်။
ကုလသမဂ္ဂတွင် ရုရှားသံအမတ်နှင့် အြပင်းအထန်ေဆွးေနွးမှုြပုလုပ်ြပီးေနာက် အေမရိကန်သံအမတ် Zalmay Kulilzad က ေဂျာ်ဂျီယာသမ္မတ ရာထူးမှဆင်းေပရန် ရုရှားအစိုးရ၏ ေြပာဆိုမှုကို ရှုတ်ချလိုက်ပါသည်။ ရုရှားနိုင်ငံြခားေရး၀န်ြကီးက အေမရိကန်နိုင်ငံြခားေရး၀န်ြကီးနှင့် တယ်လီဖုန်းြဖင့် အြပန်အလှန် ေြပာဆို ြကရာတွင် ဒီမိုကေရစီနည်းလမ်းအရ ေရွးေကာက်ထားသည့် ေဂျာ်ဂျီယာသမ္မတ ရာထူးမှ ဆင်းရမည်ဟု ေြပာဆိုခဲ့မှုမှာ လံုး၀လက်ခံစရာ မရိှေြကာင်းြဖင့် အေမရိကန် သံအမတ်က ေြပာြကားခဲ့ပါသည်။
ေဂျာ်ဂျီယာအစိုးရက တပ်များကို ြပန်လည် ြပန်ရုတ်သိမ်းရန် ြကိုးစားေနြကေသာ်လည်း ရုရှာအစိုးရက တပ်များြပန်လည်ရုတ်သိမ်းေရးကို ခွင့်ြပုြခင်းမရိှဟု ၀ါရှင်တန်ရိှ အေမရိကန်အရာရိှများက ေြပာြကားလိုက်ပါသည်။
ေဂျာ်ဂျီယာနိုင်ငံသမ္မတ Mr.Saakashvili အေနြဖင့် ၎င်း၏သမ္မတသက်တမ်းတွင် ေဂျာ်ဂျီယာကို ခွဲထွက်ေရးနယ်ေြမ Abkhazia နှင့် ၁၉၉၀ခုနှစ်များ အေစာပိုင်းက တိုက်ခိုက်မှုများမှ လက်ေတွ့ ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့် ရရိှခဲ့သည့် ရုရှားကို လိုလားသည့် နယ်ေြမြဖစ်ေသာ ေတာင် Ossetia တို့နှင့် ြပန်လည် ေပါင်းစည်းေရး ြကိုးပမ်းရာမှ တင်းမာမှုများ တိုး၍ ြဖစ်ေပါ်ခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါနယ်ေြမများတွင် ေနထိုင်သူ အများစုကို ရုရှားက Passport များ ထုတ်ေပးခဲ့ြပီး ြငိမ်းချမ်းေရး ထိန်းသိမ်းမှုတပ်များကို တပ်စွဲထားေစခဲ့ပါသည်။ ယခင်အပတ်က ေတာင် Ossetia နယ်ေြမတွင် ေဂျာ်ဂျီယာ တပ်များ ြမို့ေတာ်ကို သိမ်းပိုက်ရန် ြကိုးပမ်းမှုမှ တိုက်ပွဲြပင်းထန်စွာ ြဖစ်ပွားခဲ့ြခင်းြဖစ်ပါသည်။ အဆိုပါ တိုက်ခိုက်မှုသည် ေဂျာ်ဂျီယာတို့ဘက်မှ ြကိးစွာေသာ မှားယွင်းတွက်ချက်မှုြကီးပင် ြဖစ်ပါသည်။
သတင်းပို့ချက်များမှာ အမျိုးမျိုးြဖစ်ေနြပီး အနည်းဆံုးေသဆံုးသူ (၁၀၀)မှ အများဆံုး (၂၀,၀၀၀)ခန့် ရိှသည်ဟု ဆိုပါသည်။ သို့ရာတွင် ထိုသို့သတင်းပို့မှုများသည် ေသချာစွာ တွက်ချက်ထားေသာ သတင်းပို့မှုများ မဟုတ်ပါ။ ရုရှားအစိုးရ အရာရိှများက ရုရှားနိုင်ငံသို့ ေတာင် Ossetia ြပည်သူများ (၃၀,၀၀၀) ေကျာ် ထွက်ေြပးတိမ်းေရှာင်သွားသည်ဟု ဆိုပါသည်။
ရုရှားက ေြပာြကားရာ၌ Ossetia ြပည်သူများကို ကာကွယ်ရန်ြဖစ်ြပီး ကျူးေကျာ်တိုက်ခိုက်သူ ေဂျာ်ဂျီယာများကို အပစ်ေပးြခင်းသာ ြဖစ်သည်ဟု ဆိုသကဲ့သို့ ေဂျာ်ဂျီယာတို့က ေဂျာ်ဂျီယာနယ်ေြမထဲရိှ ခွဲထွက်ေရးနယ်ေြမမှ တိုက်ခိုက်မှုကို တွန်းလှန်ရန်နှင့် ရုရှားတပ်များ တရားမ၀င်တပ်စွဲထားြခင်းမှ ေမာင်းထုတ်ရန်ြဖစ်ေြကာင်း ေြပာဆိုပါသည်။
ရုရှားအစိုးရ အရာရိှများက ရုရှားသတင်းေအဂျင်စီများကို ေြပာြကားရာ၌ တနဂင်္ေနွေန့ေနှာင်းပိုင်း ညတွင် ေဂျာ်ဂျီယာတပ်များ ေတာင် Ossetia နယ်ေြမရိှ Tskhinvali ကို တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသည်ဟု ဆိုပါသည်။
ေဂျာ်ဂျီယာ အစိုးရအရာရိှများက စေနေန့တွင် သတိေပးေြပာြကားရာ၌ ရုရှားများသည် Gori ြမို့ကို သိမ်းရန် ရည်ရွယ်နိုင်သည်ဟု ဆိုပါသည်။ Gori ြမို့သည် Tskhinvali ြမို့မှ (၄၅)မိနစ်ခန့်သာ ေမာင်းရြပီး ေဂျာ်ဂျီယာ စစ်တပ်အတွက် အဓိက တပ်စွဲရာေနရာြဖစ်ပါသည်။ ၎င်းသည် ေတာင်ြကားတွင်တည်ရိှြပီး ေဂျာ်ဂျီယာနိုင်ငံ၏ အေရှ့နှင့်အေနာက် တစ်၀က်စီ ဆက်သွယ်ထားေသာ ပင်မလမ်းေြကာင်းေပါ်တွင် ရိှပါသည်။
ေဂျာ်ဂျီယာ ြပည်ထဲေရး၀န်ြကီးဌာန အရာရိှြဖစ်သူ Shota Utiashvili က ေြပာြကားရာ၌ ရုရှားတို့၏ တင့်ကားနှင့် စစ်တပ်များသည် Gori ြမို့၏ ကီလိုမီတာ အနည်းငယ်အတွင်းသို့ ေရာက်ရိှေနြပီး ေဂျာ်ဂျီယာ နိုင်ငံကို နှစ်ြခမ်းပိုင်းနိုင်ရန် ြကိုးပမ်းလျက်ရိှသည်ဟု ဆိုပါသည်။ ၎င်းက ေြပာြကားရာ၌ ရုရှားတို့သည် ေဂျာ်ဂျီယာနိုင်ငံကို သိမ်းပိုက်ရန် ြကိုးပမ်းပါက နိုင်ငံအတွင်း ေနရာအနှံ့ ေြပာက်ကျားစစ်ပွဲများ ြဖစ်လာလိမ့်မည်ဟု ဆိုပါသည်။ ထို့အြပင် ၎င်းက ေြပာြကားရာ၌ ၎င်းတို့အေနြဖင့် လူသားချင်း စာနာေထာက်ထားေသာ အကူအညီများလိုပါေြကာင်း၊အေြကာင်းမှာ ေထာင်ေသာင်းမက ဒဏ်ရာရသူများနှင့် ြပည့်နှက်ေနြပီး လက်နက်များလည်း လိုအပ်လျက်ရိှေြကာင်း ေြပာြကားသွားပါသည်။
တနဂင်္ေနွေန့ ညေန၌ Gori ြမို့ အနီအနားတွင် အေြမာက်နှင့်တင့်ကားမှ အေြမာက်ပစ်သံများ ြကားေနရပါသည်။ အပစ်အခတ်ရပ်နားစဉ် ေဂျာ်ဂျီယာစစ်တပ်မှ Gori ြမို့အတွင်းသို့ ၀င်ေရာက်၍ ြမို့ကို ကာကွယ်ရန် ြကိုးပမ်းေနြကပါသည်။
လူနာတင်ကားများ Gori ြမို့နှင့် Tbilisi ြမို့အြကား လွန်းပျံေြပးလျက်ရိှြပီး Gori ြမို့မှ မိသားစုများသည် ကားများနှင့် ြမည်းလှည်းများြဖင့် ထွက်ေြပး တိမ်းေရှာင်လျက် ရိှြကပါသည်။ ရုရှား ထိန်းချုပ်ထားသည့် နယ်ေြမမှ Eredv နှင့် Prisi ေကျးရွာများအနီး ေဂျာ်ဂျီယာနယ်ေြမအတွင်းသို့ အေြမာက်များြဖင့် ပစ်ခတ်လျက်ရိှသည်ကို ြမင်ရေြကာင်း The New York Times သတင်းစာ၏ သတင်းေထာက်က ေြပာြကားပါသည်။
Abkhazia လက်ေတွ့ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနယ်ေြမအစိုးရ၏ ဒုတိယနိုင်ငံြခားေရး၀န်ြကီး Mr. Gvindzhiya က Gori ြမို့သို့ ရုရှားတပ်များ တိုက်ခိုက်၀င်ေရာက်မှုသည် ြကီးစွာေသာ ြပဿနာြဖစ်ြပီး ေဂျာ်ဂျီယာနှင့် တိုက်ရိုက်ရင်ဆိုင် တိုက်ခိုက်ြခင်းပင် ြဖစ်ေြကာင်း သတိေပးေြပာြကားပါသည်။ Abkhazia ခွဲထွက်ေရးနယ်ေြမတွင်လည်း တိုက်ခိုက်မှုများ ပိုမိုြဖစ်ပွားလျက် ရိှပါသည်။
တနဂင်္ေနွေန့ အေစာပိုင်းက ရုရှားအေနြဖင့် ၎င်း၏တပ်များကို ၆,၀၀၀ အထိ (၂)ဆ ြမှင့်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ ေလထီးတပ်သားများြဖစ်ြပီး ပင်လယ်နှင့်အနီးရိှ ေလဆိပ်သို့ ရဟတ်ယာဉ်များြဖင့် ပို့ေဆာင်ခဲ့ြခင်း ြဖစ်ပါသည်။ Abkhazia နယ်ေြမတွင် ေဂျာ်ဂျီယာအေနြဖင့် တစ်ခုတည်းသာ ထိန်းချုပ်ထားနိုင်သည့် Kodori Gorge တွင် တိုက်ပွဲများ ြပင်းထန်စွာ ြဖစ်ပွားလျက် ရိှပါသည်။
၀ါရှင်တန်တွင် Secretary Rice အေနြဖင့် စေနေန့ည တစ်ေလှျာက်လံုး ဘွတ်ရှ်အုပ်ချုပ်ေရး အဖွဲ့၏ အြခားအရာရိှများနှင့် လံုြခံုေရးေကာင်စီ ဆံုးြဖတ်ချက်အတွက် အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။ အေမရိကန် သံတမန်များက ေြပာြကားရာ၌ ၎င်းတို့အေနြဖင့် အဂင်္ါေန့မတိုင်မီ လံုြခံုေရးေကာင်စီအေနြဖင့် မဲြဖင့် ဆံုးြဖတ်ရန် မလိုလားေသးေြကာင်း ၊ အေြကအလည်ေဆွးေနွးြပီး ရုရှားအစိုးရကို အများသိ အရှက်ရေစရန်သာ ြဖစ်ေြကာင်း ၊ လံုြခံုေရးေကာင်စီ ဆံုးြဖတ်ချက်သည် ြပင်းထန်မှုမရိှသည့်အြပင် အြမဲတမ်း လံုြခံုေရးေကာင်စီ အဖွဲ့၀င်ြဖစ်သည့် ရုရှားမှ ဗီတိုအာဏာြဖင့် ပယ်ချမည်သာ ြဖစ်ေြကာင်း ၊ ေမှျာ်လင့်ရသည်မှာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲေရးအတွက် ဖိအားေပးရန်သာ ြဖစ်ေြကာင်း ေြပာြကားခဲ့ပါသည်။
လတ်တေလာအချိန်တွင် ေဂျာ်ဂျီယာနှင့် အေနာက်နိုင်ငံ သံတမန်အရာရိှများက ေြပာြကားရာ၌ ေဂျာ်ဂျီယာအေနြဖင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲေရး အဆိုြပုချက်ကို ရုရှားသို့ ကမ်းလှမ်းေြကာင်း ၊ သို့ရာတွင် ရုရှားအရာရိှများက လက်ခံရန် အသိအမှတ်မြပုဟု ဆိုပါသည်။
Posted by လင္းဦး(စိတ္ပညာ) on at Monday, August 11, 2008
အင်း ။ သတင်းအတွက် ေကျးဇူးဗျာ။
တတိယကမ္ဘာစစ် ြဖစ်မှာေတာင် ေြကာက်ရတယ်။ ရုရှားက ေတာ်ေတာ် ရိုင်းတယ်ဗျ။
သတင်းေတွ အစံုအလင် ဖတ်ရတဲ့ အတွက် ေကျးဇူးပါ ကိုလင်းဦးေရ.
ယဉ်ေကျးတဲ့ လူ့ အသိုင်းအ၀ိုင်း မှာ ငုပ်လှျိုးေနတဲ့ ရိုင်းစိုင်းမှုေတွ ထွက်လာတာ ြမင်ရတာပဲဗျို့.
ဒီသတင်းကို ေသချာဖတ်ချင်ေနတာ။ အဂင်္လိပ်လို လိုက်ဖတ်ဖို့က အခုတေလာ အချိန်မေလာက်ဘူး ြဖစ်ေနတယ်။ အလုပ်များေနတာရယ် ြမန်မာြပည်က ဦးေလး ဆံုးသွားလုိ့ အသုဘ အခမ်းအနားအတွက် ကူညီေပးဖို့ သူငယ်ချင်းေတွကို အေ၀းကေန စီစဉ် ညွန်ြကား ေနရတာရယ်။
အခုမှပဲ အရန်သင့်ေလး ခူးခပ်ြပီးသားေလး ြမန်မာလို ဖတ်လိုက်ရေတာ့ အေတာ်ကို ေကျးဇူးတင်မိပါတယ်။